Aqalka Cad wuxuu mamnuucayaa in xarunta lala galo Apple Watch iyo aaladaha kale ee elektaroonigga ah sababo nabadgelyo awgood | Waxaan ka socdaa mac
Aqalka Cad wuxuu mamnuucayaa in lala galo Apple Apple iyo aaladaha kale ee elektaroonigga ah sababo nabadgelyo awgood
Tallaabada amniga ayaa la kordhiyay tan iyo 5-tii Janaayo ee la soo dhaafay markii isticmaalka taleefannada gacanta ee shaqsiyadeed horeyba looga mamnuucay gudaha iyo hadda sidoo kale wuxuu saameeyaa dharka la gashan karo iyo wixii la mid ah, oo ka mid ah kuwa Apple Watch ay si cad u taagan yihiin.
Afhayeenka u gaarka ah madaxweynaha, Sarah Huckabee Sanders, ayaa mas'uul ka ahaa la socodsiinta in xannibaadda ay hadda adag tahay oo ay tahay wuxuu saameeyaa dhammaan shaqaalaha, martida iyo shaqaalaha kale ee gala Wing West ee Aqalka Cad. Goobtan gaarka ah ee dhismaha waa meesha uu ka shaqeeyo madaxweynaha waana in laga ilaaliyaa khatar kasta oo dibadeed. "Amniga iyo hufnaanta nidaamyada tiknoolajiyadda ee Aqalka Cad ayaa ah mudnaanta koowaad ee Maamulka."
Tallaabooyinkan amniga waxaa dhiirrigeliya dhinacyo kala duwan oo amni oo si toos ah u saameeya shaqada saxda ah ee madaxtooyada iyo dhaqdhaqaaqyadeeda. Sidoo kale xusuusnow in mamnuucida isticmaalka aaladahaan sida Apple Watch, iPhone, iPad ama aaladaha kale ee elektarooniga ah, ay timid sidii qaybo ka mid ah buug ka hadlaya shaqadii Aqalka Cad ee Donald Trump loo soo dusiyaywaxaa qoray wariye Michael Wolff.
Runtii waxa muhiimka ah halkan waa in la ogaado xaqiiqda dhibaatada jirta waana taas madaxweynaha laftiisae runti wuxuu leeyahay hagaajin ku saabsan waxyaalaha dahsoon ee soo bixi kara, Tani waa sabab kale oo muhiim u ah mamnuucyadan. Intaas waxaa sii dheer, waxaas oo dhan waxay ka dhigayaan shaqaalaha Aqalka Cad inay aad uga xumaadaan maaddaama aysan awood u lahayn inay u adeegsadaan taleefannada dowladda dano shaqsiyadeed, marka marka ay shaqada soo galayaan awood uma yeelan doonaan inay banaanka xiriir la yeeshaan waqti kasta. Ma dhihin waa inay ka feejignaadaan taleefannada casriga ah, Apple Watch ama wax la mid ah shaqadooda, laakiin waa wax iska caadi ah in diidmada qayaxan ay ka careysiiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Aqalka Cad wuxuu mamnuucayaa in lala galo Apple Apple iyo aaladaha kale ee elektaroonigga ah sababo nabadgelyo awgood
Translatium - turjubaan, bilaash ah wakhti xaddidan oo ku saabsan Mac App Store
Philips ayaa bilaabi doonta codsi loogu talagalay Mac kaas oo noo ogolaanaya inaan maareyno nalalka Hue